Iinjongo ze- Ives zikholelwa ukuba zivela kwigama elidala lesiFrentshi elithi Ive (elifanayo neli-French Yves lanamhlanje) okanye igama lika-Norman igama lika-Ivo, zombini iifom ezimfutshane zegama eliqhelekileyo lamagama aseJalimane equkethe isakhiwo iv , ukusuka kwi-Old Norse yr , intsingiselo "yew, uqubude," isikhali esenziwa ngokubanzi kwimithi yomthi weew.
U-Ives usenokuba nalo igama elidlulileyo lomntu ovela edolophini ogama linguSt.
Ives, kwinqanaba laseHuntingdon, eNgilani.
Igama lomthombo: isiNgesi , isiFrentshi
Igama elithile Igama lokuchazwa : I- YVES, IVESS
Kuphi kwiWorld Igama le-IVES?
Ives yefayile ngoku ixhaphake kakhulu eUnited States, ngokutsho kwedatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears. Nangona kunjalo, kunomdla obunomdla oqhelekileyo, ngokusekelwe kwipesenteji yabemi, eGibraltar, elandelwa yiNgilani kunye neentlanga ezahlukeneyo ezinjengeBermuda. Nangona kuvela imvelaphi yesiFrentshi, isipelo se-Ives asiqhelekanga eFransi apho abantu abayi-182 kuphela abanalo ifani.
Ives ifani ekujikelezeni kwekhulu lama-20 yayiqheleke kakhulu e-United Kingdom, ngokutsho kweWorldNames PublicProfiler, ngokukodwa kwimimandla yase-East-East ne-East Anglia yaseNgilandi. ENtshona Melika, i-Ives ixhaphake kakhulu e-Ontario, eCanada, ilandelwa yiNova Scotia kunye ne-US yaseVermont ne-Connecticut.
Abantu abaPhezulu abanegama lokugqibela IVES
UCharles Ives - umqambi wePulitzer-winning and pianist
Burl Ives - Umdlali wefilimu waseMelika nomculi, owaziwayo ngokuthi "UFrosty the Snowman" kunye ne "Blue Tail Fly."
UChauncey uBradley Ives - umdwebi waseMelika e-Italy
UGeorge Frederick Ives - owayesigxina ekulweni kweBoer War
UFrederic Eugene Ives - umvelisi waseMerika novulindlela kwintsimi yefoto.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name IVES
Ives Blog History Blog
Le bhulogi yokuzalwa ngokwemizalwane kaWilliam Ives igubungela ibali likaWilliam Ives, umququzeleli weNew Haven CT, kunye neninzi yakhe kwinzala yakhe, kunye nalabo abatshabalalayo kwintsapho
I-DNA Isayinwa kaWilliam Ives (1607-1648)
Olu shicilelo lwe-DNA lugqityiwe ngumphumo we-Y yokuhlolwa kwe-chromosome ye-4 eyaziwayo yindoda ecacileyo, kungekho namnye ohlobene naye, noWilliam.
Iiferensi eziqhelekileyo zesiFrentshi kunye neentsingiselo zabo
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lesiFrentshi elidlulileyo kunye nesi sikhokelo samahhala kwintsimi yeFrentshi intsingiselo kunye nemvelaphi.
Ukulandelela Umthi Wentsapho Yakho eNgilani naseWales
Funda indlela yokuphanda iikhosi zakho zesiNgesi i-Ives kunye nesi sikhokelo sokuqala kwiirekhodi kunye nezibonelelo zase-Ngilani nakulo lonke elaseUnited Kingdom.
Ives Crest Family - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjengekhaya le-Ives okanye iingubo zeengalo ze-Ives. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
I-FamilySearch - IVES Genealogy
Hlola iingxelo ezingaphezulu kwama-700,000 kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca eposwe kwi-Ives ifani kunye nokuhluka kwayo kwi-website ye-Intanethi ye-FamilySearch, ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
Igama legama elibizwa nge-IVES kunye neNtsapho yoLwazi lweeNdlu
I-RootsWeb iyabamba amanqaku amaninzi angabhaso adibanisa abaphandi be-Ives.
DistantCousin.com - I-IVES Imbali Yokuzalwa Yesizukulwane Nezobuzwe
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela i-Ives.
Ives Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanegama elidumileyo igama elingu-Ives kwi-website ye-Genealogy Today.
I Top 10 Pokemon Anime Seasons
Mahjong njengeMdlalo weNjaka
INdlu yesixhenxe - iiNdlu zeenkwenkwezi
Ukuthethwa kwetenzi lwesiTaliyane: I-Ridere
Gcina okungaphezulu (ngokwezifiso) Idatha kwiNode yomthi weMboniselo yoMthi